Minisiteran’ny Asa: « Mazava ny fitantanambola…» - ewa.mg
News - Minisiteran’ny Asa: « Mazava ny fitantanambola…»
Nivoaka amin’ny fanginany. Namaly
ny fanambarana nataon’ny Sendikan’ny « insepecteur de
travail » sy ny « controleur de
travail » ny eo anivon’ny minisiteran’ny Asa, ny
herinandro teo. « Tsy mitombina ny amin’ny fisian’ny
fanodinkodinam-bola sy ny filazana fa nividianana fiara tsy
mataho-dalana ny tambin-karaman’izy ireo », hoy ny eo
anivon’ny minisitera, tamin’ny alalan’ny tale
DAFGP, Ravelonarivo Benjamin. Nanteriny fa tsy mbola nivoaka
tao anaty kitapombolam-panjakana io vola nolazaina fa
voahodinkodina io. « Mbola azo hamarinina ao
anatin’ny mangarahara izany. Sorabola no mbola mipetraka ao
hatramin’izao. Tsy azo atao velively ny manova na manakalo ny vola
fampihodinan-draharaha mankany amin’ny fampiasam-bola ao anatin’ny
fitantanana ny volam-panjakana », hoy ihany izy.
Notsindriny fa miezaka mikaroka vahaolana ny eo anivon’ny
minisitera mpiahy manoloana ny olan’ireto mpijirika asa sy
mpanara-maso asa ireto. « Efa maro ireo miverina manohy ny
asany andavanandro », hoy ihany izy ireo.
L’article Minisiteran’ny Asa: « Mazava ny fitantanambola…» a été récupéré chez Newsmada.
Nivoaka tamin'ny : 19/01/2021
Fiaraha-miasa: hanampy hatrany ny Tafika Malagasy i Chine
Mitohy hatrany ny fifandraisana ara-tafika eo amin’i Madagasikara sy ireo firenena vahiny mba hanatsarana ny traikefa hananan’ireo miaramila. Manoloana ny fanavaozan-drafitra eo anivon’ny Tafika dia misy hatrany ny fifanakalozana amin’ireo solontenan’ireo firenena avy any ivelany miasa eto Madagasikara. Tonga nitsidika ny minisitry ny Fiarovam-pirenena (MDN), ny Jly Rakotonirina Richard teny Ampahibe, omaly, ny masoivoho vaovao ny Repoblika entim-bahoakan’i Chine, i Guo Xiaomei. Nandritra ny resaka nifanaovany tamin’ity manamboninahitra ity no nilazan’ity masoivoho ity fa efa nisy ny fiaraha-miasa ara-tafika teo amin’ny firenena malagasy sy i Chine, hatramin’izay ary hitohy sy hihamafy hatrany izany. Izany rahateo no anton’ny fihaonana teo amin’ny roa tonta, io omaly io. Nisy ny fandefasana malagasy mandrato fianarana any Chine na miaramila na zandary nandritra ny taona maro ary tena betsaka tokoa izy ireo isan-taona. Nilaza izy fa rehefa misokatra ny sisin-tany dia jerena koa ny fanatsarana hatrany ny fifandraisana ara-miaramila ary anisan’izany ny fitsidihana ny sambo mpiadin’izy ireo aty amintsika. « Tena hafaliana ho ahy izao fihaonana niarahany tamin’ny minisitra izao ary mahavelom-panantenana ny fiaraha-miasa », hoy ity masoivoho vaovao ity. Nohamafisiny fa hanararaotra hiasa mafy hiaraka amin’ny minisitry ny Fiarovam-pirenena izy mba hanomezany fiaraha-miasa ara-miaramila tonga lafatra.Jean ClaudeL’article Fiaraha-miasa: hanampy hatrany ny Tafika Malagasy i Chine a été récupéré chez Newsmada.
FLM Farafangana: hampidirina anaty CNaPS ny katekista miisa 1.042
Anisan’ireo zana-paritra fahatelo amin’ireo valo mandrafitra ny synodam-paritany Fiangonana Loterana Malagasy (FLM) Atsinanana ny any Mahafasa Centre. Na lavitra aza ny lalana mankany miainga eo Farafangana, tonga tany an-toerana ny Tahirim-pirenena misahana ny fiahiana sosialy (CNaPS), nampiofana ny tompon’andraikitry ny fiangonana mikasika ny zon’ny mpiasa, indrindra ny fiahiana sosialy. Miisa 1.042 ny katekista any amin’ny synodam-paritany FLM Atsinanana, ka nanaraka ny atrikasa ny 79 amin’izy ireo. Nilaza ny Pastora Andrianjafy Octave Bénil, filohan’ny sybida fa “tsy maintsy ampidirina ho mpikambana anaty CNaPS avokoa ireo katekista ireo, hatramin’ny volana marsa 2020, izay efa voafaritry ny tetikasa diakônaly amin’ny fiarovana ny zon’ny mpiasa”.Hanana fidiram-bola fanampinyNampahafantarina ireo mpizaika ny fanampian’ny CNaPS ny katekista sy ny ankohonany. Ny fanampiana ny fianakaviana, ny ho an’ny tra-doza vokatry ny asa, ny fisotroan-dronono, sns. Resy lahatra ireo 79 niofana fa tena ilaina ny fiahiana sosialy. Nohamoraina ny fikarakarana, toy ny famenoana ny antontan-taratasy, angatahana ny fanampiana.Nampirisihin’ny talen’ny CNaPS Mandimbisoa Mamy ireo mpiofana hamorona asa fihariana mampidi-bola fanampiny, toy ny fiompiana akoho gasy ohatra, hanamorana ny fandoavana latsakemboka. Nizarana fahatsiarovana sy kojakoja samihafa izy ireo, miampy bokikely mirakitra lalàna ny fiahiana sosialy, hanamafy ny fahalalana azo.Njaka A.L’article FLM Farafangana: hampidirina anaty CNaPS ny katekista miisa 1.042 a été récupéré chez Newsmada.
Noraisin’ny governora ireo ben’ny Tanàna AJMA
Nihaona tamin’ny governora, Rasoamaromaka Hery, tetsy Ambohidahy omaly ireo fikambanan’ny ben’ny Tanàna tanora eto amin’ny faritra Analamanga “Association des Jeunes Maires Analamanga – AJMA. Voaresaka ny tohin’ny fihaonambe fampahafantarana ny fijoroan’izy ireo herinandro vitsy lasa izay, tetsy Anosy. Anisan’izany ny fampandrosoana eny ifotony, iarahana amin’ny filoha Rajoelina Andry. Nohamafisina koa ny fiaraha-miasa eo amin’ny faritra sy ny eny anivon’ny kaominina mba hampirindra ny fanatanterahana ireo fampandrosoana, miainga eny ifotony ary takin’ny filoham-pirenena. Nitondra ny hetahetany sy ny olana any amin’ny kaominina iadidiany avy ireo ben’ny Tanàna tamin’izany.Synèse R. L’article Noraisin’ny governora ireo ben’ny Tanàna AJMA a été récupéré chez Newsmada.
Filohan’ny Antenimierampirenena: “Mila mazava ny fanoherana”
“Ilaina ny fanazavana tsara ny amin’ny fanoherana ao anatiny sy ny ivelan’ny Antenimierampirenena, izay teboka iray lehibe tokony hodinihina.”Io ny nambaran’ny filohan’ny Antenimierampirenena, Razanamahasoa Christine, teny Anosy, afakomaly, momba ny fandinihan’ny solombavambahoaka indray ny lalàna mifehy ny mpanohitra amin’ny fivoriana tsy ara-potoana, hanomboka ny 12 aogositra ho avy izao. Misy koa ny fanazavana hafa ny amin’ny pitsompitsony madinidinika ny amin’izay lalàna mifehy ny fanoherana izay.Satria mandala ny atao hoe demokrasia repoblikanina i Madagasikara, izay indrindra no ilàna ny hijerena akaiky izany lalàna izany mba hahazoana mandrindra ny atao hoe maro anisa sy ny mpanohitra eto amin’ny tany sy ny fanjakana. Notsiahiviny fa misy ny filoha lefitra fahafito eo anivon’ny Antenimierampirenena, izay ho an’ny lehiben’ny mpanohitra.Efa nahabe adihevitra hatramin’ny ela… Izao vao hodinihin’ny parlemanta ny amin’ny lalàna mifehy ny fanoherana; eny, na efa an-taony vitsivitsy talohan’izao aza no nampiaka-peo ny antoko politika sasany ny amin’ny tokony hanovana fa tsy fanitsiana fotsiny izany: mila fakan-kevitra vaovao…Ny fitondrana teo aloha aza, ninia tsy namoaka ny didim-panjakana fampiharana azy. Hany ka nivoaka tety ivelan’ny hoe lapan’ny demokrasia na ny Antenimierampirenena ny fanoherana, fa tsy tena nisy adihevitra azo raisina sy nitombina.Amin’izao hoe fanitsiana ny lalàna momba ny fanoherana izao, tena hahasolo tena ny mpanohitra sy hoeken’izy ireo ve, ohatra, izay ho lehiben’ny mpanohitra eo amin’izany? Mba tsy hisian’ny fanoherana amin’ny fidinana an-dalambe. Saika miafara amin’ny krizy politika hatrany izany hatramin’izay, fa tsy mitondra ho amin’ny fifanoheran-kevitra hampandrosoana.R.Nd. L’article Filohan’ny Antenimierampirenena: “Mila mazava ny fanoherana” a été récupéré chez Newsmada.
CAN 2019: mpanohana ofisialy ny lalao ny Orange
Fanineniny no hanohana amin’ny fomba ofisialy, ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika, taranja baolina kitra “Can 2019”, hatao any Egypta, ny orinasan-tserasera, Orange. Raha tsiahivina, mpiara-miombonantoka amin’ny baolina kitra afrikanina, nanomboka ny taona 2008 ny Orange.Firenena misy ny Orange avokoa ireo 11 amin’ireo 24 tafita amin’ny “Can 2019” ka anisan’izany, i Kameronina, Côte d’Ivoire, RD Kongo, Egypta, Ginea, Ginea Bisao, Madagasikara, Mali, Maraoka, Sénégal ary Tonizia. Araka izany, ho hita amin’ireo kianja hilalaovana ny marika Orange.Hisy fanentanana, hatao eto Madagasikara sy fifaninanana hahazoana mivahiny any Egypta. Hatao any amin’ireo toerana voatokana izany, miaraka amin’ny fahitalavitra lehibe hanarahana ireo lalao rehetra. Tanjona, ny iainan’ireo mpanjifa ity fetin’ny kitra ity. Hisy koa ny «tournoi orange kitra », hatao any amin’ireo faritra samihafa, hitondra ny anaran’ireo ekipa 24 miatrika ny «Can 2019 », ka hanomboka ny asabotsy 22 jona, ny fifanintsanana.Hisy koa ny «tournoi », atao amin’ny PES 2019, any amin’ireo firenena isan-tokony, ka hisolo tena ny fireneny avy, ny ho mpandresy, izay hiatrika ny famaranana lehibe «Panafricaine Orange Esport Experiecne», ny 17 sy 18 jolay, any Le Caire Egypta. Ho an’i Madagasikara, hotanterahina ny 15 jona, izao, eny amin’ny Arena Ivandry ny dingana famaranana. Ankoatra ny fivahinianana any Egypta, hijery ny famaranana ity «Can 2019» ity ihany koa io solontenan’i Madagasikara, io.Tsiahivina fa haharitra hatramin’ny taona 2024, ny ho fanohanan’ny Orange, ny Caf, amin’ity fifaninanana, ity. Torcelin L’article CAN 2019: mpanohana ofisialy ny lalao ny Orange a été récupéré chez Newsmada.
Fametrahana toerana fampinonoana: orinasa 20 sy minisitera efatra ihany no manara-dalàna
Mampihena hatramin’ny 27% ny taham-pahafatesan’ny zaza ny fampinonoana azy vao teraka ka hatramin’ny fahenim-bolany (fanadihadiana Lancet 2013). Nonon-dreny tsy misy fangaro ny omena azy hiarovana amin’ny aretina sy hiantoka ny fivelaran’ny sainy sy ny vatany mandritra ny enim-bolana voalohany ary tokony hotohizana hatramin’ny faha-2 taony. Eto Madagasikara, 51% ny tahan’ny fampinonoan-dreny tsy misy fangarony ary nihena ho 42% ny tahan’ny tsy fanjarian-tsakafo mitarazoka mahazo ny zaza latsaky ny 5 taona. Nisy ny vokatra azo tao anatin’ny taona maromaro fa mbola lavitra ny tanjona 90% napetraky ny sampandraharahan’ny Firenena mikambana momba ny fahasalamana (OMS). “Raha tratra io fenitra io, 823 000 isan-taona ny zaza voaaro amin’ny fahafatesana”, hoy ny minisitry ny Fahasalamam-bahoaka, ny profesora Rakotonrina Julio, omaly teny Ambohidahy.Sarotra ny hanatanteraka ny fampinonoana tsy misy fangarony ho an’ny eto amintsika. Telo volana ihany ny faharetan’ny andro tsy iasana mifandraika amin’ny fiterahana. 41 andro mialoha ny tetiandro ahaterahana no tsy maintsy miato amin’ny asany ny vehivavy mitondra vohoka. Mbola vao roa volana latsaka indray ny zaza, tsy maintsy miverina miasa izy raha tsy manana andro tsy iasana intsony. Ny mpitsabo rahateo, manome torohevitra amin’ny hampifangaroana avy hatrany ny nonon-dreny sy ny vovo-dronono vita voatra raha hiverina hiasa ilay reny mba tsy hanampoka ilay zaza amin’ny fizarana ny « biberon ». Azo terena ny nonon-dreny ary tahizirina ho an’ny reny miasa nefa vitsy ny tena mahavita izany araka ny fenitra ara-pahasalamana.Adiny iray isan’andro mandritra ny 15 volanaMisy ny fametrahana efitra manokana hampinonoana ho an’ny orinasa mampiasa vehivavy mihoatra ny 25. Adiny iray isan’andro mandritra ny 15 volana ny zon’ny vehivavy mampinono ny zanany na miasa aza izy. Orinasa 20 sy minisitera efatra ihany aloha no manaraka izany lalàna izany hatramin’izao. Misy ny sazy ho an’ireo tsy manaja lalàna ary afaka mandeha amin’ny sampandraharaha manokana fanaraha-maso ny asa ny vehivavy mitaraina raha tsy voahaja izany. Hisy orinasa efatra vaovao hanampy isa ny 24, araka ny fanazavan’ny talen’ny fiahiana sosialin’ny mpiasa ao amin’ny minisiteran’ny Asam-panjakana, Rafarahanta Nirina. Any Miarinarivo no hanamarihana ny Herinandrom-pirenena ho an’ny fampinonoan-dreny, rahampitso. Maro ny hetsika hanentanana ny maha zava-dehibe ny fampinonoana tsy misy fangarony ny zaza hatramin’ny enim-bolana.Vonjy L’article Fametrahana toerana fampinonoana: orinasa 20 sy minisitera efatra ihany no manara-dalàna a été récupéré chez Newsmada.
Imarovolana: mandrahona milaza fa zandary ireo mpangala-tany
Raikitra indray ny halatra tany ao Imarovolana fokontany Soanarivo, kaominina ambanivohitr’i Fiaferana. Efa mipetrapetraka mihitsy ny fomba fiadin’ireo mpangalatra, araka ny fijoroana vavolombelona nataon’ny tompon-tany iray. Misy andian’olona mivondrona ao anaty fikambanana mibodo tanin’olona ka ataon’izy ireo fitadiavam-bola mihitsy izany. Miroso amin’ny fanarenana ny tany ireo mpangalatra ka manangana trano eo amin’ilay tanin’olona avy eo. Tonga teny an-toerana ny tompon-tany niaraka tamin’ny sefom-pokontany ao Soanarivo, ny faran’ny herinandro teo. Nisy ny fampitahana ny taratasy fanamarinana teo am-pelatanan’ireto mibodo tany sy ny tena tompony. Nilaza anefa ny tompon-tany fa azy ireo tokoa ny tany niaraka tamin’ireo taratasy ara-dalàna manaporofo izany. Tsy nety namoaka ny taratasy kosa ireto andian’olona mibodo tanin’olona ireto. Valin-teny an’avona sy fandrahonana anefa no nataon’izy ireo ary nilaza fa efa nandalo teny amin’ny fitsarana ny raharaha ka antony nahazoan’izy ireo ny tany. Nilaza ny tompon-tany fa ny taona 2017 izy ireo no tonga teo ary nanao fanohanana teny amin’ny kaominina Fiaferana ka nahazo rariny tamin’izany. Nandeha teo ny resaka fa hampiakarina fitsarana ny raharaha. Misy milaza fa zandary anefa tamin’ireo mpangalatra ary hoe mahalala olona ambony ao amin’ny fitsarana.J.C L’article Imarovolana: mandrahona milaza fa zandary ireo mpangala-tany a été récupéré chez Newsmada.
Saba-droa lela : Be loatra ny mpanelanelana
Iray amin’ireo tsiny mahazo ny mpanakanto eto an-toerana ny tsy fahaiza-mivarotra. Kanefa azo amidy avokoa, “hono”, izay ateraky ny talenta… Sa ve misy sakana tsy ahafahan’izy ireo mivarotra ao ambadibadika ao?Efa ela tsy nisy sahy nandà fa manan-talenta ny Malagasy. Mana­ma­fy izany ny fananan’i Mada­gasikara mpanakanto maro misehatra amina zavakanto samihafa. Tsy vitsy amin’izy ireny ny mivarotra ny asa vitany avy amin’io talentany io. Hatreto anefa, mbola mahatsiaro ho voambaka ny ankamaroany. Tsy mety mifandanja ny varotra fa toa matiantoka hatrany ny tompon’entana na ny mpanakanto. Raha tsy mi­fanaraka amin’ny filàn’ny mpanjifa, tsy hividy izy. Ma­rina io satria lalan’ny varotra… Fa tsy diso ihany koa ny filazana fa tsy tokony hosandaina amina varifitoventy ny talenta voajanahary! Manjaka be eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena, ohatra, ny atao hoe fanarahana fenitra. Tsy ny tompon’ny talenta ny mametraka an’io fa ry zareo mpanelanelana kinga amin’ny raharaham-barotra. Matetika izy ireny ny “mibaiko” ny mpanan-talenta. Na tiana na tsy tiana, tsy maintsy ho voabaiko manaraka izay ihany koa ny talenta. Ao ireo nanjary nanana lasitra iray mihitsy, satria, izany, hono, ny takin’ny tsena. Anisan’ny manana ny mampiavaka azy, ohatra, ny hira malagasy, kanefa tsy mahavaky ny tsena iraisam-pirenena raha tsy manaraka ny fepetra apetraky ny mpanelanelana. Vokatr’izay, mety ho zary mifahatra amin’ny varotra ny zavakanto malagasy, raha ny lalana tahaka io no arahina. Mbola azo lazaina ho kanto ihany ve anefa ny vokatra teriterena tahaka izany? Nahoana ireo mpanelanelana no hametraka ny fenitra ho an’ny zavakanto? Anisan’ny vahaolana tsara ho an’ny mpanakanto malagasy (mpihira, mpanao asa tanana,…) ny fananana fahaizana mikaro-dalana sy mifampiraharaha ao anatin’ny tontolon’ny varotra. Fa raha mbola ireo mpanelanelana no hanao izay hampandeha ny varotra ataony, tsy hanana izay maha izy azy mihitsy ny mpanakanto! Sa ve, samy manana ny anjara asany?HaRy RazafindrakotoL’article Saba-droa lela : Be loatra ny mpanelanelana a été récupéré chez Newsmada.
Fanitsian-drafitry ny Tafika…: hapetraka ny “base aérienne” 213 ao Arivonimamo
“Miaina rivo-baovao ny Tafika ana habakabaka hatramin’ny nametrahana ny Etamazaoron’ny Tafika ana habakabaka ny taona 2020 sy ny nahazoana ireo fitaovana vaovao toy ny helikoptera sy ny fiaramanidina ny taona 2019 avy amin’ny fanjakana”, hoy ny fanazavan’ny minisitry ny Fiarovam-pirenena (MDN), ny Jly Rakotonirina Richard, afakomaly, raha namory ireo eo anivon’ny Tafika ana habakabaka teny amin’ny Bani Ivato notronin’ny lehiben’ny Etamazaoron’ireo Tafika, ny Jly Sahivelo Delphin sy ireo manamboninahitra mpiara-miasa aminy. Nohamafisiny tamin’izany fa miompana amin’ny fanampiana ny vahoaka amin’ny fiarovana amin’ny ambana maro lafy, ny fanavotana ny ain’ireo mpiray tanindrazana ary ny fanohanana amin’ny fampandrosoana no isan’ny andraikitry ny Tafika ana habakabaka, ankoatra ireo asa efa nosahaniny teo aloha. Nohazavainy fa ny fametrahana ny “base aérienne” 213 ao Arivonimamo izay fivondronan’ny Bani Ivato sy ny Batac Arivonimamo, ny hananana olombelona manana traikefa afaka mikarakara fiaramanidina ka ho Tafika ana habakabaka mifarana amin’ny taonjato faha-21. Noho izany, nampitomboina ny isan’ny miaramila misehatra amin’ity antokon-tafika ka hatsangana ny “Académie de l’air” ao Arivonimamo hanatrarana izany tanjona izany. Eo koa ny fanaparitahana ireo vondron-tafika manerana ny Nosy ka hapetraka tsy ho ela ny “détachement aérien” ao Antsohihy sy Ihosy hanafainganana ny famitana ny iraka fampandriana fahalemana.Jean ClaudeL’article Fanitsian-drafitry ny Tafika…: hapetraka ny “base aérienne” 213 ao Arivonimamo a été récupéré chez Newsmada.
Aucun nouveau cas de Covid-19 enregistré sur l’ensemble du territoire national le 25 juillet 2021. Les 79 tests effectués à cette date n’ont ainsi relevé aucune nouvelle infection. En revanche, un décès a été rapporté, survenu à Analamanga. À ce jour, le décompte officiel affiche 944 décès survenus à Madagascar depuis le début de l’épidémie en mars 2020. Par ailleurs, 33 cas graves sont toujours en cours de traitement, tandis que le nombre de guérisons comptabilisées le 25 juillet est de 12. Le cumul des cas confirmés depuis maintenant 16 mois est de 42 669 sur un total de 224 771 tests réalisés. Le nombre total des guérisons est de 42 270. Hanitra R. L’article Bilan Covid-19 : Zéro nouveau cas et 1 décès le 25 juillet 2021 a été récupéré chez Midi Madagasikara.
DSNGR: iray volana ny fitsarana miaramila eny Betongolo
Hanomboka ny alatsinainy 2 aogositra 2021 ho avy izao ny fitsarana miaramila manerana ny Nosy. Entanina ny tovolahy sy vehivavy feno 19 hatramin’ny 31 taona hanatona ireo toerana hanatanterahana izany amin’ny daty voatondro, izay efa nampitaina teo anivon’ny tranonkala sy ny pejin’ny minisiteran’ny Fiarovam-pirenena ary eny amin’ny biraon’ny fiarovana amin’ny distrika. Nanamafy ny talen’ny Fitaleavana ny fanompoam-pirenena sy fiandry (DSNGR), ny Jly Rasolonirina Roger fa ho fitsinjovana ireo zatovo sy ho fisorohana ny filaharana lava dia natao iray vola ny tetiandro fitsarana miaramila ho an’Antananarivo manokana ka hatao eny amin’ny kianjan’ny Betongolo, ny alatsinainy hatramin’ny alahady mandritra ny vola aogositra. Entanina ireo izay tokony hanao izany adidy amin’ny firenena izany mba tsy hiandry farany vao hanatona ny toerana hitsarana miaramila, hoy ity manamboninahitra ity. Azon’ny olona iray atao ny mitsara miaramila amin’ny toearna misy azy eny na ireo vahiny sendra mandalo aza ary tsy misy ny fisoratana anarana mialoha. Aorian’ny fitsarana dia misy ny karatra maitso homena izay niatrika izany ho fanamarinana ny fahavitan’izany.Jean ClaudeL’article DSNGR: iray volana ny fitsarana miaramila eny Betongolo a été récupéré chez Newsmada.